Xiriirka diirimaadka, Kaniisadda Adduunka ee God Switzerland (WKG)
Waa wax lagu farxo in la helo waqti farxad leh, taxadar la'aan iyo farxad leh xiriir diiran. Fadhiiso adiga oo midba midka kale iska fadhiyo, oo ku raaxeeysanaya cunno macaan, isla mar ahaantaasna ku abuura xiriir saaxiibtinimo inta lagu jiro wadahadalka. Dadbadan oo sawirka muuqaalka ka muuqda sawirka hore aad ayaan u dhiirigeliyaa. Caruurta iyo ayeeyooyinka waxay kufiirsadaan dadka waaweyn qosolkooda waxayna wada qaataan saacado raaxo leh oo xiiso leh.
Horey ma u jeclaan laheyd inaad la kulanto dhacdo noocan oo kale ah oo dhiirrigeliya? Waxaa laga yaabaa inaad dooneysay inaad waxbadan ka ogaato wixii ku soo dhaafay ama booqde aad xiiseyneyso oo aad dooneysay inaad sii wanaajiso xiriirkaaga isaga ama iyada.
Waxaan idinla wadaagayaa sheekada sida wanaagsan loo yaqaan ee Sakariyas. Wuxuu ahaa nin taajir ah, sarkaalka ugu sarreeya ee Yerixoo iyo waxyar oo gaaban. Kolkaasuu fuulay geed jirid ah si uu u arko Ciise oo ag maraya. Ma uusan dooneynin dadka inay ka hor istaagaan aragtidiisa ku saabsan Ciise.
Markuu Ciise geedkii ka gudbay, kor buu u eegay oo u yeedhay: Sakhayosow, dhaqso u soo deg! Waa inaan maanta marti ku ahaadaa gurigaaga. Dad badan ayaa carooday markii ay taas arkeen. "Sidee buu u marti qaadi karaa dambiilaha noocaas ah!"
Laakiin Sakhayos wuxuu u tegey Rabbiga oo ku yidhi: Sayidow, waxaan xoolahayga nuskeed siin doonaa masaakiinta, haddii aan qof madow u dhiibto, waxaan siin doonaa afar jeer intii la siin lahaa. waa la keenay, maxaa yeelay ninkanu sidoo kale waa ina Ibraahim »(Ka bilow Lk 19, 1-9).
Isaga ayaa iska leh inaan qalbigeenna furi karno si aan ugu korayno xiriir diiran, ha ahaato xagga Ciise, deriska ama xitaa nafteenna Su’aasha ayaa ah: Ma waxaan marti qaade u jeclahay mise marti sharaf iyo soo dhaweyn mahadnaq leh? Si kastaba, waxaa la iga rabaa inaan ilaaliyo xiriir diiran. Aniguna aragtidayda waxay muujineysaa sida saxda ah ee Jacaylka. Jacaylku ma ahan oo keliya dareen duulitaan ah, laakiin waa qeexitaanka astaamaha Eebbe iyo carruurtiisa. Sidaa daraadeed waa dabeecadaada sida Ciise Masiix walaalkiis ama walaashaa, haddii wax mar kale khaldamaan xiriirkaaga, inaad geedka ka soo degtid oo aad nadiifiso xiriirkaaga cidhiidhiga ah. Waxay kaaga soocaa sidii marti qaali ah inaad aqbasho jaceylka, sida ay u kala saarto martigeliyaha inuu siiyo jaceylka iyo dareenka martida.
Kulannada soo socda ee aan la yeelanayo asxaabta ama ehelkaaga, waxaan kuu rajeynayaa farxad iyo saacado aad u xiiso badan!